बोतलमा पेट्रोल बेच्नेलाई का’रबाही हुने ! – Nepal Online Khabar
बोतलमा पेट्रोल बेच्नेलाई का’रबाही हुने !
चैत्र २, २०७८ बुधबार 395
काठमाडौं : ताप्लेजुङमा बोतलमा भरेर ‘पेट्रोलियम पदार्थ’ बिक्री गर्नेलाई का’रबाही हुने भएको छ । पानीको बोतलमा भरेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्नु
गै’रकानुनी कार्य भएकाले यस्तो कार्य गर्नेलाई स्थानीय प्रशासनले का’रबारी गर्ने चे’तावनी दिएको हो । बिनाअनुमति तथा गै’रकानुनी रुपमा बोतलमा भरेर जताभावी ‘पेट्रोलियम पदार्थ’ बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीलाई का’रबाही हुने प्रशासनको भनाई छ ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका दिन मङ्गलबार जिल्ला प्रशासनसहित संयुक्त टोलीले सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारको अनुगमन गरेको छ । बजार अनुगमनका क्रममा बोतलमा राखेर जताभावी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको भेटिएपछि यस्तो अ’वैध रुपमा पेट्रोल बिक्री वितरण गर्नेलाई का’रबाही गर्ने बताएको छ ।
उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा सचेतना फैलाउने कार्यक्रमसहित बजार अनुगमन भएकाले अवैध रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गरेको पाइए पनि अनुगमन टोलीले अन्तिम मौकास्वरुप सम्बन्धित बिक्रेतालाई बुधबार बिहान १० बजेसम्म हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
तोकिएको समयभित्र नहटाएमा वा बोतलमा राखेर पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको पाइएमा तत्काल ज’फत गरी बिक्रेतालाई कानुनबमोजिम का’रबाही गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यमबहादुर भट्टराईले चेतावनी दिनुभयो ।- यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
PrevDediPath Hosting Assessment
Nextराजेन्द्र लिङदेन भन्नुहुन्छ :- “कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट दिनु मृ-त्यु पत्रमा हस्ताक्षर गरेसरह हो” ।
क्यान्सरभन्दा ख’तरनाक कालो ढुसी , कस्ता मानिसलाई सं’क्रमण हुन्छ ? यसबाट बच्न के गर्ने ?